एलइडी बल्व खरिद रोक्न माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट, अदालतले दियो कारण देखाउ आदेश :: BIZMANDU
एलइडी बल्व खरिद रोक्न माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट, अदालतले दियो कारण देखाउ आदेश
प्रकाशित मिति: May 19, 2017 6:25 PM
काठमाडौं । लोडसेडिङ घटाउन सरकारले सुरु गरेको एलइडी बल्व खरिद बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधिश डा. आनन्द मोहन भट्टराईको इजलाशले शुक्रबार बल्व खरिदमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता अच्युतप्रसाद घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सहित सात निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। २५ बैशाखमा परेको रिट गत मंगलबारका लागि पेशी तोकिए पनि न्यायाधिश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले हेर्न भ्याएको थिएन। सरकारले १२ जेठमा अदालतमा जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ।
रिटमा अधिवक्ता अर्यालले भारत सरकार स्वामित्वको इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल)बाट कानुन बिपरित बल्व गर्न खरिद गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। सरकारले उक्त कम्पनीबाट नौ वाट क्षमताको दुई करोड थान एलइडी बल्व खरिद गर्न लागेको छ।
अहिले अधिकांश उपभोक्ताको घरमा रहेको सिएफएल र साधारण बल्वलाई उक्त परिमाणको एलइडी बल्वले ‘रिप्लेस’ ल्याउँदा सुक्खा यामको पिक आवरमा २०० मेगावाट बिजुली बचत हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आंकलन छ।
यो पनि हेर्नुहोस्- भारतमा एलइडी बल्व बाँडेर ६००० मेगावाट बिजुली बचत, नेपालमा त्यही गर्दा भ्रष्टाचार?
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुसार उक्त कम्पनीसँग बल्व खरिद प्रकृया अघि बढाएको थियो। ऐनमा मित्रराष्ट्रको स्वामित्वको कम्पनीबाट सोझै खरिद गर्न सक्ने प्रावधान छ। यही प्रावधान अनुसार इइएसलबाट बल्व खरिद गर्न लागेको सरकारले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा समेत यही प्रावधान रहेको छ। इइएसएलले प्रतिगोटा १०४ रुपैयाँ (भारु ६५) को दरले हेटौँडा ल्याएर एलइडी बल्व उपल्बध गराउने सरकारलाई जनाएको छ। कम्पनीले फिलिप्स र ओस्राम ब्राण्डका बल्व नेपाललाई दिनेछ। अहिले बजारमा चार सय रुपैयाँ माथि मूल्य पर्ने यी बल्व प्राधिकरणले अधिकतम भन्सार र भ्याट जोडेर अधिकतम १४० रुपैयाँमा मासिक किस्ताबन्दीमा ग्राहकलाई दिने जनाएको छ।
एलइडी बल्व खरिद रोक्न माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट, अदालतले दियो कारण देखाउ आदेश को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।